हिजो घ’टेको सुनको मूल्य आज फेरि बढ्यो ! हेर्नुहोस् कति पुग्यो मूल्य…. – SUDUR MEDIA
हिजो घ’टेको सुनको मूल्य आज फेरि बढ्यो ! हेर्नुहोस् कति पुग्यो मूल्य….
December 30, 2020 December 30, 2020 AdminLeaveaComment on हिजो घ’टेको सुनको मूल्य आज फेरि बढ्यो ! हेर्नुहोस् कति पुग्यो मूल्य….
काठमाडौंः नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य चाहिँ घ’टेको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबार सुन १ सयले बढेको हो भने चाँदी १५ रुपैयाँले घ’टेको हो । मंगलबार ९४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज बुधबार १ सय रुपैयाँले घ’टेर ९४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला ९३ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी भने आज १५ रुपैयाँले घ’टेर प्रतितोला १ हजार ३०५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्: जाडोयाममा सुन्तला खानुका यस्ता छन् फाइदा ! हुन त सुन्तला फल्ने मौसम नै जाडोको समयमा हो । यो मौसममा सुन्तला खानु अत्यावश्यक छ । तर कतिपयले भने चिसो लाग्ला भनेर सुन्तला खाँदैनन् । यदि तपाई पनि यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो सामग्री खुराक बन्नेछ । यस्ता छन् जाडोमा सुन्ताला खानुका फाइदा
कोलेस्टरोल घटाउनः सुन्तलामा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरमा कोलेस्टरोलको मात्रा घटाउँछ । रक्तचाप नियन्त्रण गर्नः सुन्तलामा पाइने फ्लाभोनोइड हेस्पेरिडिन र म्याग्नेसियमले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ । मिर्गौला स्वस्थ राख्नः सुन्तला खाँदा मिर्गौलासम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन जान्छ र पत्थरीको समस्या पनि हुँदैन । कलेजो जोगाउनः सुन्तलामा क्यारोटेनोइड्स नामक तत्व पाइन्छ, जसले कलेजोको क्या’न्सर हुनबाट जोगाउँछ ।
छालाको सुरक्षाः सुन्तलामा बेटा–क्यारोटिन पाइन्छ । यो उत्तम एन्टी अक्सिडेन्ट हो । यसले छालालाई चम्किलो बनाउँछ । भाइरल इन्फेक्सन हटाउँछः सुन्तलामा पोलिफेनोल्स जस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । यी तत्वले रुघाखोकी जस्ता भाइरल इन्फेक्सनबाट जोगाउँछन् ।
क’ब्जियत खुलाउनः क’ब्जियतको समस्या छ भने सुन्तला खाने गर्नुस्, दिसा खलास हुन्छ । यसमा फाइबरको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ । आँखा तेजिलो बनाउनः सुन्तलामा पाइने भिटामिन–ए, क्यारोटेनोइड जस्ता तत्वले आँखालाई तेजिलो बनाउँछन् र रतन्धोजस्तो स’मस्या देखापर्न दिँदैनन् ।
क्या’न्सरबाट जोगिनः सुन्तलामा साइट्रस लिमोनोइड्स प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले छाला, फोक्सो, स्तन, पेट र मलाशयमा हुने क्या’न्सरबाट जोगाउछ । मुटु बलियो बनाउनः सुन्तलामा पोटासिमय र इलेक्ट्रोलाइट मिनरल हुन्छन् । यिनले मुटुको गतिविधिलाई सुचारु राखी यसलाई स्वस्थ राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ । – एजेन्सीको सहयोगमा
झलनाथ खनाललाई झा’पड हान्ने रेग्मी एक्कासी मिडियामा, आ’क्रोशित हुदै राष्ट्रपतिलाई दिए यस्तो चे’तावनी ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)